That's so good, right?: My Travel Agents Son
ဘာရယ်တော့မဟုတ် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြို့ပြင်ကိုခဏသွားရမှာကြောင့် မနက်တုန်းက ကုမ္ပဏီကို ကျွန်တော်မသွားခဲ့ပါဘူး။ စောစောတော့နိုးတာပေါ့လေ ဒါပေမဲ့ သွားရမယ့်ဟာ မသွားသေးဘဲ နံနက် ၈ နာရီဝန်းကျင်လောက်က ကျွန်တော်နေတဲ့ တိုက်ခန်း ၀ရံတာမှာ သတင်းစာ တစ်စောင်ကို အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ဖတ်နေမိခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ သတင်းအစုံအလင်ဖတ်ပြီးတော့ အညောင်းဆန့်ရင်း ထရပ်လိုက်ကာ ၀ရံတာက တစ်ဆင့် အလုပ်များလွန်းလှတဲ့ လမ်းမထက်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်နေရင်း ဆိုတော့ အပေါ်ပိုင်း တီရှပ်တောင်မကပ် အောက်ပိုင်း ကတော့ zero quarter လောက်ရှိတဲ့ boxer ဘောင်းဘီအနီရောင်ကိုဝတ်ထား သည်ပေါ့နော်။
ခဏနေတော့ တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေသလို ခံစားရတာကြောင့် ဟိုသည်ကြည့်လိုက်တာ သူ့ကိုတွေ့လိုက်ပါ တယ်။ အသားအရေ တော်တော့်ကိုကောင်းပြီး စူးစူးရှရှကို သတိထားမိလောက်အောင် sexy ဖြစ်လွန်းတဲ့ပုံဟန်နဲ့ အလွန်ဆုံးရှိလှ ၂၂ နှစ် လောက်သာရှိမယ့်သူပါ။ ချောမောလွန်းတဲ့ကောင်လေးကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီထဲက ညီဘွားက ဟယ်လိုတဲ့ ထနှုတ်ဆက် တယ်ဗျ။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ လိပ်စာတစ်ခုခုမှတ်ထားတာကိုကြည့်ရင်း လိုက်ရှာနေပုံပဲ။ ကျွန်တော် သူ့ကိုကျော်ပြီး စားနေကြ မုန့်ဆိုင်ကို ငေးပြီးနောက် အဲ့ကောင်လေးရှိရာကို ပြန်အကြည့် ရင်ဘတ်ထဲဒိန်းကနဲဖြစ်သွားရပါတယ်။ သူက ကျွန်တော်ရှိရာကို တည့်တည့်မတ်မတ် စိုက်ကြည့်နေတာနဲ့သွားဆုံတာ…ဟီး။
သူ့လက်ထဲက စာရွက်ကိုကြည့်လိုက် ကျွန်တော့်ကိုကြည့်လိုက်အပြန်ပြန်အလှန်လှန်လုပ်နေတာ တော်တော်ကြာတယ်။ ဒီတော့ စိတ်ကူး ထဲ ကျွန်တော်မျောပြီပေါ့…သေးသော သူ့ခါး…ခပ်ပြည့်ပြည့် သူ့နှုတ်ခမ်း…အင်းတော်တော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာပဲ။ အတွေးထဲ မိနစ်အတော် ကြာအောင် ကျွန်တော်လွင့်နေတာ သတိပြန်ကပ်တော့ မြင်ကွင်းထဲမှာ ကောင်လေးမရှိတော့ဘူး ပျောက်သွားပြီ။ ရင်ထဲ စိတ်ပျက် လက်ပျက်ကိုဖြစ်သွားရော။ ကောင်းလေးကိုသာ ရလိုက်လို့ကတော့ အီဆိမ့်နေမှာပဲလို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်အားပေးရင်း ကုမ္ပဏီအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်မယ့်ကိစ္စပြန်လည်ချဉ်းကပ်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ မြင်လိုက်ရတဲ့ကောင်လေးရဲ့ ဆွဲဆောင်ညှို့အားပြင်းပုံလေး တွေကို တွေးတထင်ထင်ပေါ့။
ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာပြီးနောက် ကျွန်တော့်အခန်းဝက တံခါးဘဲလ်သံမြည်တာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ တံခါးကိုဖွင့်လိုက်သည့်နောက် ကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရေသော ကောင်ကလေး ကျွန်တော့်တံခါးဝမှ မတ်တပ်ရပ်နေတာကို အံ့အားသင့်ဖွယ်မြင်ခဲ့ရသည်။ `သီဟ´ ဆိုတာ ဒီအခန်းကလားလို့ သူကမေးတော့ ကျွန်တော်ပါပဲလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ဆီကို စာအိတ်တစ်အိတ်လက်ကမ်း ပေးလိုက်တာ အဲဒါ ကျွန်တော့်ခရီးသွား ကိုယ်စားလှယ်က လေယာဉ်လက်မှတ်များပါလား။ ကောင်လေးက သူ ဒီကို လေယာဉ်လတ်မှတ် တွေပို့ပေးဖို့ လာတာလို့ပြောရဲ့။
ကျွန်တော် ခရီးသွားကိုယ်စာလှယ်ကြီးရဲ့ရုံးခန်းကိုသွားသွားနေတုန်းက သူ့ကိုမမြင်ဘူးတော့ ၀န်ထမ်းသစ်လား ဘာလားအခြေအနေ မေးမြန်းကြည့်ပါတယ်။ သူက `မြဧရာ´ခရီးသွားကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းကြီးရဲ့ပိုင်ရှင့်သားဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ကျောင်းမသွားဖြစ်တော့ ရုံးမှာ ၀န်ထမ်းတွေကလည်း အလုပ်များနေတာကြောင့် လေယာဉ်လတ်မှတ်တွေကို သူ့အဖေက အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သူ့နာမည်က ၀ီလျံ လို့ခေါ်ပါကြောင်းလည်းဖြေတယ်ဗျ။ အာ…ကိုဇော်ကြီးရဲ့သားဆိုရင် အခန်းထဲခဏ၀င်ထိုင်ပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ပါတယ်။ သူက ခွန်းတုန့်မဖြေဆိုဘဲ အခန်းထဲအလိုက်သင့်ဝင်လာတာကြောင့် တံခါးရွက်ကိုစေ့လိုက်ရာ အော်တိုလော့ခ်ျဖြစ်သွားပါရော။ မထူးဆန်းနဲ့နော် အော်တိုလော့ခ်ျစနစ်တံခါးမို့ပါ။
ကျွန်တော့်အခန်းနံရံမှာ အနေအထားပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံတွေရှိလို့နေပါတယ်။ Gym ကိုဝါသနာပါစွာကစားထားတဲ့ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်တွေကိုကောင်းကောင်းရိုက်ကူးထားတာလေ။ အဲဒါကို ၀ီလျံကကောင်းကောင်းကြည့်နေတာများ ပန်းချီကားတစ်ကားကို အသေအချာ အာရုံစိုက်စူးစမ်းနေပုံမျိုးဗျ။ ကာလာ tone ကဘယ်လို ကောက်ကြောင်းက ဘယ်ဒင်းနေမှာပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ကလည်း ဓာတ်ပုံလေးတွေအကြောင်း ပြောပြချင်လို့ ပါးစပ်တပြင်ပြင် သူကလည်း ဓာတ်ပုံတွေကြည့်လိုက် ကျွန်တော့်ဆီကိုကြည့်လိုက် ပါးစပ်ပြင်လိုက်နဲ့။
သူက `အစ်ကို….အစ်ကို့ biceps တွေကတော်တော်ကောင်းတာပဲ´တဲ့။ အာ….ကျွန်တော်က gym မသွားဖြစ်တာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ ဆိုတော့ ဓာတ်ပုံထဲကလောက် မထင်းတော့ဘူး စမ်းကိုင်ကြည့်ပါလားလို့ပြောလိုက်တယ်။ အချိန်မဆိုင်းဘဲ သူ့အနားကပ်သွားကာ လက်မောင်းကိုအားပြုညှစ်ပြလိုက်တာ သူက အသာတို့ထိကိုင်ကြည့်ပြီး ကောင်းတုန်းပါပဲဗျ သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆို ဒီတစ်ဝက်လောက် ရှိသင့်တာတဲ့ပြန်ပြောရဲ့။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ကျေနပ်သလိုလိုနဲ့ဆိုတော့ကာ ဒီအရွယ်အစားထက်ပိုကြီးအောင် ကြိုးစားကစားဦးမှာလို့ ပြောလိုက်တယ်။
အခုခေတ်မှာ ယောက်ျားလေးတော်တော်များများဟာ လှပတောင့်တင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပုံရိပ်တွေရဲ့စွဲဆောင်မှုတွေနောက် နှစ်သက်စွာလိုက်ပါတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလှပမှုတွေနောက် မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးတွေရဲ့ သွေးဆောင်တတ်မှုအရ အိပ်ရာပေါ်ကိုလိုက်ပါဖို့အကြောင်းတွေဖြစ်တည်လာရတတ်ပါရဲ့။ အခုလည်းပဲ ၀ီလျံတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်တွေရဲ့ စွဲဆောင်မှုနောက် ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်ခဲ့သလို လိုက်ပါလာပါပြီ။ စကားခင်းရတာပေါ့လေ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအလုပ်များနေလို့ Gym မသွားဖြစ်တာကြောင့် နည်းနည်းတောင်ရွဲချင်လာပြီကြည့်ပါလားဆိုပြီး အပေါ်က၀တ်ထားတဲ့ တီရှပ်ကိုချွတ်ပစ်လိုက်တယ် သူ့ ရှေ့မှောက်မှာ။
ကျွန်တော့် ကျောပြင်ကြွက်သား၊ ရင်အုပ် နှင့် abs တွေကို ထိကိုင်ကြည့်ချင်လားလို့ စကားစလိုက်တော့ သူ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ခပ်ဖြေးဖြေးတို့ထိပါရော။ ဒါ အပေါင်းလက္ခာဆောင်ခြင်းပါပဲ…..`ခဏလေး….အကို မင်းကိုဒီ့ထက်ပြဦးမယ်´လို့ပြောလိုက်ပြီး အပေါ်က ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီတိုကိုချွတ်လိုက်ပြီး သူ့ရှေ့မှောက်ဝယ် အတွင်းခံလေးနဲ့ရပ်ပြလိုက်တယ်လေ။ သူ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို မြင်ရပြီးနောက်မှာတော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ချီးမွှမ်းသံလေးတွေထွက်ကျလာသလို ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကိုတပြန်ချီးမြှောက်ရတာပေါ့. ``ညီက တော်တော်ချောပြီ sexy ကျလွန်းတယ်…..တစ်ယောက်ယောက်ကို အလွယ်တကူစွဲဆောင်နိုင်မှာသေချာတယ်၊ အထူးသဖြင့် ညီ့နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေပေါ့´´ ကျွန်တော်အဲ့လိုသူ့ကိုပြောခိုက် ကျွန်တော့်လက်ချောင်းလေးတွေဟာ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေပေါ်တို့ထိ ထားပါရော။ သူ့နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို အသာတို့ထိရင်း `ဒါဟာ ညီ့ရဲ့ တကယ့်အားသာချက်ပဲလို့၊ပြီးတော့ ဒီနှုတ်ခမ်းသားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ဆိုရင် တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင်သေလောက်တယ် တစ်ယောက်ယောက်ကတော့လေ´လို့ညွှန်းလိုက်တယ်။
စကားမစပ် ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်လေး စတင်ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲ ကျွန်တော်နားလည်ခဲ့ပါပြီ သူသည်လည်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်သောင်းကြမ်းနေတဲ့ကိစ္စမျိုး အလားတူခံစားနေတယ်ဆိုတာလေ။ သူ့တုန့်ပြန်မှုတွေ ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာသိချင်တော့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့တို့ထိကြည့်တာ သူက အေးဆေးပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော် နားလည်ခဲ့ရတာက သူသည်လည်း gay တစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ခံစားချက်အသစ်တစ်ခုကို စူးစမ်းရှာဖွေချင် တဲ့စိတ်ရှိနေသူလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အရင်းခံအကြောင်းကို ရှေ့တိုးတဲ့အနေနဲ့ `ညီ့နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက ဖူးဖူးလေးနဲ့ ပန်းသွေးရောင်ထနေတာပဲနော်…..အနမ်းချွေပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲ သတိထားဦး ငါ့ကောင်´လို့ပြောလိုက်တယ်။
သူက ကျွန်တော်စနောက်နေတယ်ထင်ပြီး ပုံမှန်လေသံနဲ့ `အို…ပုံမှန်ပါပဲ အစ်ကိုရာ….အစ်ကိုညာနေပြီထင်တယ်´တဲ့။
ကျွန်တော်က `တကယ်…တကယ်ပြောတာမညာပါဘူး အစ်ကိုတောင်မင်းနှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းချင်နေပြီ´လို့ပြောလိုက်တော့ သူဘာမှ တုန့်ပြန်မပြောဘူး။ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ကျွန်တော်အနမ်းခြွေမှာကိုသူလည်းလိုချင်နေပုံပါ။ ဒီတော့ သူ့အနားကိုတိုး မျက်နှာနားကို ငုံ့ကိုင်းလိုက်ကာ ကဲကြည့်ဆိုပြီးလက်တွေ့ကွင်းဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ နုညံ့ပြီး ပန်းသွေးရောင်ပြေးနေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်း သားလေးတွေကိုစုပ်နမ်းလိုက်ပြီး သူ့တုန့်ပြန်မှုကို ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက ပြုံးရောင်သန်းလာတယ် သူ့နှုတ်ခမ်းကို အနမ်းချွေနေစဉ်မှာ ကျွန်တော့်ညီဘွားက ရုတ်တရက်ခေါင်းထောင်ထလာတာကို သူသတိပြုမိဟန်တူသား။ ခပ်ပါးပါး အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်က မမာ့တမာ ကျွန်တော့်ငထွားရဲ့ ခေါင်းပြူထွက်မှုကို သူသေချာပေါက်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ငပဲက 6.5 လက်မလောက်ရှည်ပြီး နည်းနည်းတုတ်ကာ အမွှေးအမျှင်ကတော့ ရိတ်ထားတာကြောင့်ရှင်းနေပါတယ်။ သူ့ မျက်ဝန်းတွေက ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက အတွင်းခံပါးပါးဆီရောက်ပြီး ငပဲရဲ့ခေါင်းထောင်ထနေမှုကိုသူ စူးစမ်းနေတာကို ကျွန်တော်မြင် တာပေါ့နော်။ ကျွန်တော် သူ့လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲကိုင်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ပေါက်ခြံဆီတင်ပေးလိုက်တာ သူရုန်းကန်မှု မလုပ်ပဲ ကိုင်တွယ် ပါတယ်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် ဘာမှမလှုပ်မရှား ကျွန်တော့်ငပဲကိုကိုင်လျှက်အနေအထားနဲ့ရပ်နေပြီးနောက်မှာ လှုပ်ရှားမှုအချို့ စတင်ပါတော့တယ်….`အစ်ကို့ပစ္စည်းကလည်း တော်တော်ထွားတယ်နော်´တဲ့။
ကျွန်တော်က ညီတွေးထင်သလောက် မကြီးပါဘူးကွာလို့ သူ့ကိုဖေးမလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀ီလျံက `အင်း…ဒီဟာကြီးနဲ့ တစ်ယောက် ယောက် -င်ထဲထည့်ခံရရင်တော့ အဲ့လူမခံနိုင်လောက်ဘူးလို့ ညီတော့ထင်တာပဲ´တဲ့။
ကျွန်တော်က `မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွာ အဲ့ဒီတစ်ယောက်ရဲ့-င်ကိုမပြဲစေနိုင်လောက်ပါဘူး´လို့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့ သူ့လက်အစုံက ကျွန်တော့် အတွင်းခံရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုရောက်နေပြီး မာတောင့်နေတဲ့ကျွန်တော့်ငပဲကို သူကိုင်ထားပါရဲ့။
ကျွန်တော်က `ကြိုးစားကြည့်ပါလား….´´လို့ပြောလိုက်တော့…၀ီလျံက `အို….မှားမှာပေါ့´တဲ့။
`ဘာကိုမှားရမှာလဲညီရ….အပျော်သဘောပဲဟာ….အစ်ကိုနဲ့ sex လုပ်လို့ဗိုက်မကြီးပါဘူးကွ။ ဒါက ဂိမ်းတစ်ခုပဲဟာ ကစားကြည့်စမ်းပါ´ လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွင်းခံအနားသပ်စီရောက်ရှိပြီး ဒူးအထိဆွဲချလိုက်ကာ ထွားနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ စတင်ပွတ်သပ်ကစားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေကိုတစ်လုံးဖြုတ်လိုက် နောက်တစ်လုံး ဖြုတ်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးချွတ်ချလိုက်တာပေါ့။ သူ့ ဂျင်းဘောင်းဘီရဲ့အောက်ပေါ်လာတာက အနီရောင် boxer ဘောင်းဘီတိုတစ်ထည် ၀တ်ထားတာပါ။ အပေါ်က တီရှပ်အင်္ကျီ ကို အသာချွတ်ပေးပြီးနောက် ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ တဖြေးဖြေးအောက်ကိုလျောကျသွားပြီး အတွင်းခံနှုတ်ခမ်းသားတွေထဲဝင်သွားကာ တင်သားဆိုင်တွေဆီရောက်ရှိသွားပါတယ်။ အသာအယာပွတ်သပ်ဖိညှစ်ပြီးနောက်မှာတော့ အတွင်းခံကို ကျွန်တော်တကယ့်ဖြေးငြင်းစွာချွတ်ပေးလိုက်ရော။ သူသည်လည်း အ၀တ်ကင်းမဲ့သောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကျွန်တော့်လိုပဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်နေပါပြီ။ သူ့ငပဲကလည်း မတ်ထောင်နေတာများ ကျွန်တော့်ဟာနဲ့ နင်လားငါလားပါပဲ။ ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ ၆ လက်မ၀န်းကျင်လောက်ရှိမယ့် သူ့ပစ္စည်းပေါ်ညင်သာစွာရောက်ရှိကာ အသာအယာပွတ်သပ်ပြီးနောက် အထက်အောက်ကစားပေးလိုက် တာ သူ့နှုတ်ဖျားက မိန်းမောသာယာသံလေးတိုးတိုးထွက်လာတယ် တကယ်ပါ။
ဘယ်လိုလည်းညီ အကိုနဲ့ကစားရတာ အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ သူ့နစ်မျောပျော်ဝင်မှုအခြေအနေကို မေးမြန်းလိုက်တော့ သူက မျက်ဝန်း များကို မှေးမှိတ်ထားရင်းမှ `ဟုတ်ကဲ့´တဲ့။ သူ့တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ကျွန်တော့်လက်တွေနဲ့အုပ်ကိုင်ကာ ကျွန်တော့်ဆီးခုံနဲ့ သူ့ဆီးခုံ ဂဟေ ဆက်အောင်ဆွဲကပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့တင်သားဆိုင်နှစ်ခုကြားက အကွဲကြောင်းလေးတလျှောက် လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ခပ်ရွရွ လေးပွတ်သပ်ကစားသည်ပေါ့။ သူ့တင်သားဆိုင်တွေကို ညှစ်လိုက် လျော့လိုက်နဲ့ ကျွန်တော့် လက်ချောင်းများနဲ့ ခရေ၀လေးထဲ သွေးတိုးစမ်းမှုအပေါ် rhythm ကျကျလေးတုန့်ပြန်ပါရော။
အခု လက်ခလယ်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ ထိုးသွင်းကစားနေရာက လက်ညှိုးလေးတစ်ခုပါထပ်ပေါင်းထည့်ပြီးကစားမယ်လုပ်တော့ တော်တော် ကြပ်လွန်းတာမို့ တံတွေးနည်းနည်းလောက်ယူကာဆွတ်ရင်း ခရေ၀ထဲဖိဖိသွင်းရပါသည်။ မကြာခင်မှာပဲ သူလည်းနေတတ်ပြီးအလိုက် သင့်ဆိုတော့ လက်ချောင်းလေးတွေအသွင်းအထုတ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေလာပြီးနောက် သူလည်း သာယာလာပါ၏။
တစ်ချိန်တည်းလိုလိုမှာပဲ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားများဟာ ပန်းသွေးရောင်သန်းနေပြီး သေးငယ်သော ယောက်ျားကိုယ်သင်းနံ့ဖြင့် သာယာဖွယ်ရှိသော နို့သီးခေါင်းလေးကို စူးစမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော် သူ့ကိုကျွန်တော့်လက်မောင်းများဖြင့် ပွေ့မလိုက်ပြီး ကျွန်တော့် အိပ်ယာဆီကိုခေါ်ဆောင်လိုက်ပြီး ခုတင်ဘေးက သီချင်းဖွင့်စက်လေးမှ အချစ်သီချင်းအေးအေးငြိမ့်ငြိမ့် လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါရော။ ကျွန်တော့်ငပဲကို သဘောကျလား မိုက်လား စသဖြင့်စူးစမ်းလိုက်တော့ သူက တခြားလူတွေနဲ့မကစားပဲ သူနဲ့သာဆိုရင် သဘောကျမယ်လို့ ခေါင်းငြိမ့်တယ်ဗျ။ အင်း…..ကျွန်တော့်ငပဲကို -ုပ်ပေးပါလားလို့တောင်းဆိုလိုက်တော့ သူက ` ကျွန်တော်တစ်ခါမှ -ီးတစ်ချောင်းကို မ-ုပ်ဖူးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဗျ´တဲ့။
ဒီတော့ သူ့ဦးခေါင်းကို ကျွန်တော့်လက်အစုံနဲ့အသာအယာကိုင် သူ့ပါးစပ်ကို ကျွန်တော့်ငပဲရှေ့ခေါ်ဆောင်လိုက်ကာ ခေါင်းကို ကျွန်တော့်ငပဲ သူ့ပါးစပ်ထဲအဆုံးထိရောက်စေဖို့ ဖိပေးလိုက်တယ်။ `ငယ်ငယ်တုန်းက lollypop ကိုစုပ်ပြီးစားသလိုမျိုး ချိုချဉ်ကို စားသလိုမျိုးလုပ်ကြည့်ပါလို့ သူ့ကိုအကြံပေးဖြစ်ပါရဲ့။ သူ လျှာဖျားလေးကိုထုတ် ကျွန်တော့်ငပဲ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်လေး သွေးတိုးစမ်း စကစားတယ် မဆိုးပါဘူး။
မိနစ်အနည်းငယ်လောက် သူလေ့လာစူးစမ်းမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ သူ -ုပ်-ှုတ်ခြင်းမှာ ကျွမ်းကျင်အဆင့်ဖြစ်သွားပြီး သူ့ခံတွင်းထဲထိ တိုင် ကျွန်တော့်ငပဲကို အထုတ်အသွင်း စည်းချက်ကျကျလုပ်တယ်။ ``အို…….လုပ်….၀ီလျံ…မင်းက တကယ့်ကောင်လေးပဲ မိုက်တယ်´´ ကျွန်တော် ကျေနပ်မှုနဲ့အတူ ညည်းညူမိပါပြီ။ နောက်တော့ ကျွန်တော့် ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲကဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပက်လက်လှဲစေလိုက် ကာ ခရေ၀ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်ကြည့်ပါလားလို့ပြောလိုက်တော့ သူကြိုးစားပါ့မယ်တဲ့။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးချောဆီလို့ဆိုနိုင်မယ့် တံတွေးခပ်များများကိုယူလိုက်ပြီးနောက် သူ့ခရေ၀လေးမှာဆွတ်ဖို့ပြင်လိုက်ပြီးမှ ခုတင်ဘေး စားပွဲပုလေးအံဆွဲထဲက lube ဘူးလေးနဲ့ ကွန်ဒုံးအချို့ကိုလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ lube ဘူးလေးထဲကနေ ခပ်များများလေးထုတ် လိုက်ကာ သူ့ခရေ၀ကိုရွှဲရွှဲစိုစေရင်း ကျွန်တော့်ငပဲကိုကွန်ဒွန် ပန်းရောင်ပါးပါးလေးစွပ်တာပေါ့လေ။
သူ တင်သားဆိုင်နှစ်ဖက်ကို အသာဆွဲဟလိုက်တော့ ပန်းသွေးရောင်ထနေပြီး သေးငယ် ကြပ်ညှပ်နေတဲ့ခရေ၀တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရ ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းလေးကို သူ့ခရေ၀လေးမှာတေ့ပြီးသကာလ တကယ့်ဖြည်းဖြည်းလေးဖိသွင်းလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက် လုပ်မိတာ မှာ သူ့ခရေ၀လေးဟာ ဖွင့်ဟလိုက် ပိတ်သွားလိုက်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီထင်တယ်ဗျ။ ဒီတော့လည်း ကျွန်တော် သူ့ခရေ၀ထဲကနေအဆုံး ထိရောက်သွားအောင် ကျွန်တော့်ငပဲကို ဖိဖိပြီးစသွင်းတာပေါ့နော်။ သူ့နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုးညည်းသံနဲ့အတူ တင်ပါးတွေကို အလိုက် သင့် ပြန်လည်ကြွပေးဖိပေးပါတယ်။
သူ့နှုတ်ဖျားက အော်ညည်းသံနဲ့အတူ `` oooooohhhhhhh.....nooooooo အစ်ကို ရပ်တော့…အဲ့နေရာမှာရပ်တော့…အစ်ကို့ဒစ် ကိုပြန်..ပြန်နှုတ်ပေးပါဗျာ….တော်တော်နာပြီး အောင့်နေတယ်…..အဲလိုနာတာကို မခံစားနိုင်ဘူး…. oooohhhhhh pleazzzzz.... အစ်ကို pleaseeeee…..နားလည်ပေးပါဗျာ´´တဲ့။
ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း လှုပ်ရှားနေတာကိုရပ်လိုက်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ဒစ်ကိုဆွဲမနှုတ်ဘဲ ခဏနေကအနေအထားအတိုင်းငြိမ် နေခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။ သူ့နားရွက်နားကပ်ကာ ခပ်တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တာက `၀ီလျံ…I Love you….အစ်ကို ညီ့ကိုနာအောင်မလုပ်ဘူး ဆိုတာယုံနော်….အစ်ကို့ကိုယုံ အဲ့ဒီနာကျင်နေတဲ့ဟာ ခဏလေးနေရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်….ဖြည်းဖြည်းလေးသွင်းမယ်နော်…..အိုကေ လား ၀ီလျံ? ´
သူ ဘာဆိုဘာမှပြန်မပြောဘဲ ငြိမ်နေတာကြောင့် သူ့ကျောပြင်လေးနဲ့ လည်တိုင်ကိုနောက်ဘက်ကနေနမ်းလို့ရမယ့်အနေအထားပြောင်း စေလိုက်ကာ တကယ့်ဖြည်းဖြည်းလေး ခပ်ငြိမ့်ငြိမ့်စတင်ထိုးသွင်းပါတယ်။ ဒီအချိန်တော့ တကယ့်ဖြေးဖြေးလေးပဲ။ သူ့အရေပြားမှာ ကြက်သီးလေးတွေထသွားတာကို မြင်လိုက်ရသလို သူ့နှုတ်ဖျားကနေ မိန့်မူးတဲ့ညည်းညူသံလေးတွေထွက်လာပါတယ်။ သူ့ကျောပြင်နဲ့ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေကပ်နေအောင်ဖက်လိုက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းထည့်လိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံးသူ့ တင်သားဆိုင်တွေထဲ တဆုံးမြုပ်သွားပါပြီ။
`၀ီလျံ….အခု အစ်ကို့ငပဲမင်း-င်ထဲရောက်သွားပြီ….သက်သောင့်သက်သာနေ….ပါးစပ်ကိုဟပြီး အသက်ဝအောင်ရှူနော်….လန့်ပြီးညှစ် ထားတဲ့ ခရေ၀ကိုဖြေလျော့လိုက်…အိုကေ´ လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ သူ အေးဆေးဖြစ်သွားပြီး သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ခါးဆီနောက်ပြန် ယှက်နွယ်လာရင်း သူ့နဲ့ပိုမိုတိုးကပ်အောင်ဆွဲယူသလို ခံစားရပါရဲ့။ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုဟာ လက်ဖ၀ါးအစုံလိုပဲ ပူးကပ်နေကြတယ်ဗျာ။
သူ…ကျွန်တော့်ငပဲကို အခုအနေထားထက်ပိုပိုပြီးနစ်ဝင်သွားအောင် သွင်းစေချင်ပုံရပါတယ်။ ကျွန်တော် အသာအယာ ပြန်ဆွဲနှုတ်လိုက် ကာ ပြန်လည်ထိုးသွင်းလိုက်တယ် အတွင်းထဲထိတိုင်ပေါ့။ ထုတ်လိုက် သွင်းလိုက်….သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်လေ။ ကျွန်တော်က `နာသေးလား ၀ီလျံ´ လို့မေးလိုက်တော့ သူက ` အစ်ကို….အစ်ကို့ကိုချစ်သွားပြီဗျာ….အမြဲတမ်းကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲ …အဆင်ပြေသွားပါပြီ….အစ်ကိုလုပ်ချင်သလို လုပ်ပါတော့´တဲ့ပြန်ဖြေတယ်။
အထုတ်အသွင်းအရှိန်နှုန်းကို နည်းနည်းလေးမြန်လိုက်ပြီးကာမှ ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆွဲနှုတ် သူ့ကို မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ အံ့အားသင့်သွားပုံရပေမယ့် ကျွန်တော်ပြောသလိုသူလုပ်ပါရဲ့။
ကျွန်တော် သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ် သူ့ကိုမြှောက်ကနဲနေအောင် ပွေ့ချီလိုက်ရင်း ဆိုဖာစောင်းပေါ်သူ့ခါးလေးကိုတင်စေလိုက်ပါတယ်။ သူ့ခြေထောက်အစုံကို ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်တင်…..သူ့ရင်အုပ်တွေအပေါ် ကျွန်တော့်လက်အစုံကိုပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်း ကစားပွဲကိုပြန်စ တာပေါ့နော်။ အတွင်းထဲထိရောက်သွားမတတ်အဆုံး ဖိဖိပြီးသွင်းလိုက်မွှေလိုက် ဗျူဟာကျင်းပြီလေ။ ဒီတစ်ကြိမ် သူ့ခရေ၀ထဲ ကျွန်တော့် ငပဲကြီးကို အထုတ်အသွင်းလုပ်တာ နာကျင်မှုမခံစားရတော့ဘူးလားမသိ တစ်ချက်တွန့်တွန့်သွားတာလောက်ပဲရှိပြီး သူမျောနေတယ်။
၀ီလျံတစ်ယောက် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို မွတ်သိပ်စွာနမ်းသလို ကျွန်တော်ကလည်း ပြင်းပြစွာ သူ့ကို-ိုးသည်ပေါ့။ မိနစ်အနည်းငယ် လောက်အကြာမှာတော့ ကျွန်တော့်သွေးခုန်နှုန်းတွေမြန်လာရင်း ဇာတ်သိမ်းချင်သလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ အပြင်ကိုဆွဲထုတ် ကွန်ဒုံးကိုချွတ် ပြီး အလကားပန်းထုတ်ပစ်ရမှာထက်စာရင် သူ့တင်သားဆိုင်တွေထဲမှာညှပ်ထားရင်းပြီးဆုံးတာကပိုကောင်းမယ်ထင်တာ သူကလည်း ထို့အတူ ပြီးဆုံးချင် ရင်ခုန်ချင်ပါသတဲ့။ တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုရဲ့ အမြင့်ဆုံးပူးကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တော် အားရပါးရကို သုက်ရည်တွေကို သူ့ခရေ၀ထဲတင်ပန်းထည့်ပြစ်လိုက်ပါတယ်….ပူနွေးချွဲပစ်သောအရည်တွေဟာ အိုး….။ သူမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ ကျေနပ်ကြည်နူးသာယာနေတာတွေ့ရတော့ ကျွန်တော် သူ့ကိုပွေ့ချီပြီး အိပ်ယာပေါ်ကိုပြန်ခေါ်လာ လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ငြင်သာစွာအနမ်းပွင့်ချွေဖြစ်ရပါရဲ့။ အိပ်ယာပေါ်မှာအသာလှဲလျောင်းရင်း အတန်ကြာ ငြိမ်သက်တဲ့အချိန်မှ သူညှစ်ထားတဲ့ တင်သားဆိုင်တွေရဲ့အားပျော့သွားမှုနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ငပဲကိုအသာဆွဲထုတ်လိုက် ပါတယ်။ နောက်တော့ သူနဲ့ ကျွန်တော် အနမ်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲကြတာပေါ့နော်။
`ကောင်လေး မင်းက အိပ်ရာကိစ္စအတော်အထာပေါက်တာပဲ ….ချစ်တယ်ကွာ´
၀ီလျံက ` ညီက တော်မှာပေါ့…..အစ်ကိုက ချစ်တတ်အောင်သင်ပေးတာကိုဗျာ….ညီ့ကို ဘယ်တော့မှ ပစ်ပါယ် မသွားရဘူးနော် အစ်ကိုသီဟ´တဲ့ ရင်ခုန်သံလေးနဲ့စကားစတယ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား မကြာခင်မှာပဲ အိပ်မောကျသွားဖြစ်ကြပါတယ်…..တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မလွတ်တမ်းဖက်တွယ် ထားကြရင်းပေါ့။
ကဲ…ဘော်ဒါတို့ရေ အချစ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုများ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြမှာပါလိမ့်။ ကျွန်တော်ကတော့ လျှပ်တစ်ပျက်အတွင်း ရင်ခုန်မိန့်မူး သာယာပြီး နှလုံးသွေးတို့ တဆတ်ဆတ်ခုန်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကနေ အချစ်ဆိုတာကို ခံစားရပါကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချင်ပါတယ်။
`ရင်ခုန်ရင် အချစ်ပဲ´ မဟုတ်လားဗျ။
Alex Aung (24 May 2014)
Posted by Alex Aung at 6:12 AM